Wararka - Afarta shaqooyinka aasaasiga ah ee taayirka mootada
1. Taageer miisaanka iyo culeyska jirka gaariga:
taageer miisaanka jirka gaariga, shaqaalaha, shandadaha, iwm, inta badan adoo adeegsanaya mugga hawada iyo cadaadiska ku jira taayirka si aad u taageerto miisaanka iyo culeyska jirka gaariga, marka aad ayey muhiim u tahay in la ilaaliyo cadaadiska hawada ee habboon.
2 gudbinta xoogga wadista iyo xoojinta birta:
si gaariga looga dhigo mid horay u socda ama istaaga, waxaa lagama maarmaan ah in loo gudbiyo awooda mishiinka iyo bareega wadada dusheeda. Tani badanaa waxay ku dhacdaa xoogga isku dhaca caagga taayirka. Marka xadka taayirku ka bato xadka bilowga degdegga ah ama kala-noqoshada degdegga ah, way fududahay in la sababo oo laga boodboodo gaadhiga, oo aad khatar u ah.
3 Beddel oo ilaali jihada gaariga:
iyadoo uu koontaroolayo knight-ka, gaariga ayaa leexanaya ama si toos ah ugu sii wadaa jihada la doonayo. Shaqadani waxaa badanaa lagu fuliyaa iyada oo loo marayo kala-jajabinta iyo dabacsanaanta caagga taayirka iyo adkeynta qaab dhismeedka taayirka. Mar haddii xawaaraha leexashada uu ka bato xadka taayirka, ma noqon doonto wax aan macquul aheyn in loo dhaqaaqo dhanka la doonayo, oo aad khatar u ah. Sidaa darteed, fadlan fiiro gaar ah u yeelo xawaaraha Baabuurka.
4. Fududee saameynta wadada:
Tani waa waxa loogu yeero waxqabadka “raaxada wadista”, taas oo yareyn karta kuuskuusyada ka dhasha dusha sare ee wadada. Shaqadani waxay inta badan ku dhacdaa mugga hawada iyo cadaadiska taayirka, dabacsanaanta caagga iyo dabacsanaanta dhismaha taayirka. Sidaa darteed, cadaadiska taayirka ma noqon karo mid aad u sareeya ama aad u hooseeya. Fadlan ku sii wado cadaadiska taayirka ee saxda ah.
Shiinaha Mashiinka la taaban karo, PU Wheel, Shiinaha PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel, Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Gawaarida Caster,